Ukucwangciswa Nokuthumela -
UKUPHATHWA KWEENKQUBO (zombini kunye ne-US)
Ixesha lokucwangcisa yi-5-6 yeentsuku zoshishino. Oku kuphela kuqikelelo olusekelwe kwixesha eliphakathi lokucwangcisa kwaye ingaba yinde okanye imfutshane kuneentsuku ze-5-6 ezikhankanywe. Iiveki neeeholide aziyiyo imihla yoshishino.
Umgca we-Nubian Wig, ukuvalwa, kunye neenwele ezininzi Kuya kufuneka ixesha elingakumbi ukuqhubekekisa, naphi phakathi iintsuku zomsebenzi 5-12 ngenxa yexesha elithathwayo ukuze adale iiwigi, kunye nokuvalwa. Asinayo inqwaba (iinwele ezikhuphayo / i-hook) esitokisini. Enkosi ngonyamezelo lwakho!
Ngexesha leeholide kunye nokuthengisa / umhla wokupapashaKukho okuqhelekileyo a I-2-3 yoshishino lomhla ekuqhutyweni ngenxa yemali enkulu yee-oda nangona kunjalo le nto ingafikelela kwiveki kwixesha lokulibala.
Inombolo yokulandelela ziya kuthunyelwa kuzo zonke iilaydi emva kokusetyenziswa kwexesha elivumelekileyo. Sizakukuthumela inombolo yakho yokulandelela nge-imeyile ukusuka kwi-paypal.
Sithumela yonke imiyalelo nge-United States Postal Service (www.USPS.com) usebenzisa i-imeyile ye-2-3 yosuku oluphambili emva kokuba umyalelo wakho usuqedile ukucubungula.
Izandiso zeeNdleko zeNdalo AYINYE uxanduva lokunye iiphakheji ezilahlekileyo okanye ezibiwe ukuba ukulandelela kwenzelwe ukuqinisekiswa. Asazi akukhokhele abathengi ukuba naziphi iipasile ezithe ilahlekile okanye ibiwe ngenxa yeemeko ebezingalindelekanga ukuba aphume Natural ulawulo Hair Izandiso My. Nceda uqinisekise ukuba uthumele kwindawo ekhuselekileyo. Zonke ii-oda ziya kuhamba nazo I-50 yexabiso le-inshorensi Ukuba ufuna ukuqinisekisa isixa esipheleleyo nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyile ngenombolo yakho yolawulo emva kokuthenga.
imiyalelo ye-$ 250 okanye ngaphezulu iya kulungela ukuthunyelwa kwamahhala! Ukukhetha ukuhlawula ukuthunyelwa akuyi kuyenza ukuba ifike ngokukhawuleza.
Nceda ubeke umyalelo ngomhla ozakukunika wona ixesha elaneleyo ukufumana yakho umyalelo phambi kokuba zakho zokunyulwa kweenwele. Ixesha lokucwangcisa alikwazi ukuhanjiswa okanye lichazwe. Nangona kunjalo ixesha lokuthumela lingaboniswa.
IZIKHONO ZEMIHLABA (onke amazwe ngaphandle kwe-United States)
Imiyalelo iya kuthunyelwa nge USPS (www.USPS.com) emva kwexesha elivumelekileyo lokucwangcisa.
Ukuthumela kunokuvela kwi-25 $ - $ 65 yama-oda wamazwe ngamazwe.
Nawaphi na amaphakheji angabonakaliyo kwaye abuyelwe kuthi aya kufumana ukubuyiselwa kwempahla kuphela. Imirhumo yokuthumela ayiyi kubuyiselwa.
Kuxhomekeke kwilizwe lakho iipakethe zingaphantsi kwe- irhafu yerhafu okanye umrhumo womsebenzi xa ufika. Inkokhelo eyongezelelweyo ayikho intlawulo eyenziwa yi-MHEHE okanye i-United States. Nceda uqhagamshelane ne-arhente yakho yedolophu ukuze ubone ukuba le ntlawulo iya kusebenza kuwe. Ukuba kunjalo uya kufuneka uhlawule loo mali ukuze ufumane iirhweba lakho.
Izandiso zeeNdleko zeNdalo AYINYE uxanduva lokunye iiphakheji ezilahlekileyo okanye ezibiwe ukuba ukulandelela kwenzelwe ukuqinisekiswa. Asazi akukhokhele abathengi ukuba naziphi iipasile ezithe ilahlekile okanye ibiwe ngenxa yeemeko ebezingalindelekanga ukuba aphume Natural ulawulo Hair Izandiso My. Nceda uqinisekise ukuba uthumele kwindawo ekhuselekileyo. Zonke ii-oda ziya kuhamba nazo I-100 yexabiso le-inshorensi Ukuba ufuna ukuqinisekisa isixa esipheleleyo nceda uqhagamshelane nathi nge-imeyile ngenombolo yakho yolawulo emva kokuthenga.
Juni 20, 2017 kwi-5: 03 pm
Ingaba guranteed 5-6 andilalele ishishini imini, ukuba kuthatha ixesha elide, ukuze ndiye kufumana imbuyekezo.
Juni 20, 2017 kwi-10: 23 pm
Akuyona igonta, Ingqikelelo. Kungenzeka kube mude okanye mfutshane kunexesha eliqhelekileyo lokucwangcisa. Nangona kunjalo senza okusemandleni ethu ukufumana yonke imiyalelo ngaphandle kwelo xesha. 🙂
Meyi 8, 2018 kwi-5: 53 pm
Isampuli iinwele zithatha ngokulingana ukuba zifumane ixesha elide?
Kwakhona, unayo inwele eninzi yokukhwela? I ndiyibone kwi sayithi yakho odola, mhlawumbi ukuyifunda ngokungachanekanga kodwa bendicinga ibonisa ingabonakali ... plz iingcebiso
Meyi 8, 2018 kwi-10: 35 pm
Mholo. Akukho isampula iinqanawa package malunga 1 - iintsuku 2 ishishini.
Julayi 16, 2018 kwi-11: 10 pm
Ngoko ke yintoni kuqikelelwa processing kunye nokuthumela kuba saphicotha lunwele isambuku esetyenziselwa crochet kunye ukwaluka?
Disemba 27, 2018 kwi-5: 55 pm
Kuxhomekeke kumyalelo wethu wangoku ukuba. Ngokuqhelekileyo iiveki ze-1-2 ukususela ngexesha oyalelayo ukuba zihanjiswe emnyango wakho.